Madaxweyne Qoor Qoor iyo Cali Guud laawe oo la kulmay Wasiiradaha Hawiye | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Qoor Qoor iyo Cali Guud laawe oo la kulmay Wasiiradaha Hawiye
Madaxweyne Qoor Qoor iyo Cali Guud laawe oo la kulmay Wasiiradaha Hawiye
Madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabelle oo maalmahan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo la qaatay Wasiirada katirsan Xukuumada Soomaaliya ee kasoo jeeda Beesha Hawiye.
Kulanka Madaxweyne Qoor Qoor iyo Cali Guudlaawe la qaateen Wasiirada kasoo jeeda beesha Hawiye ayaa diirada lagu saaray khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya iyo sidii xal looga gaari lahaa khilaafka taagan.
Waxa sidoo kale Madaxda Galmudug iyo Hirshabelle kala hadleen Wasiirada katirsan Xukuumada in muhiim tahay in laga gaashaanto in dhibaatooyin ka dhasha doorashada ka dhacaan deegaanada beeshu degto.
Madaxda maamulada Galmudug iyo Hirshabelle oo isku dhiibay dowlada uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayaa cabsi badan ka qaba in dhibaatooyin ka dhaxlaan dooarshada halka dhinac u raran ee la doonayo in dalka ka dhacdo.
Musharaxiinta iyo siyaasiyiinta Mucaaradka ku ah dowlada federaalka oo inta badan kasoo jeeda Beesha Hawiye ayaa horey uga digay maamulada Hirshabelle iyo Galmudug in ay isku dhiibaan Villa Soomaaliya kana shaqeeyaan doorasho aan loo dhameyn.
Previous articleWaqtiga waa sii socdaa Doorasho lama haayo
Next articleDowlada Ingariiska oo ku dhawaaqday in ay u tababareysa ciidamo Soomaaliya
Rag siyaasiyiin ah ayuu usoo dirsaday Midowga Musharrixiinta waxayna mucaaradka lawadaageen in lasiin doono Ra'isulwasaaraha iyo xubno wasiirro ah, sidaas darteed ay buuqa yareeyaan. Isaga...
Liiska xildhibaanadi mudo xileed koodu dhamaadey ee saxiixay mooshinka muda...
Sedax maamul Goboleyd oo laga hergalinaayo mashruucyo waa weyn
Madaxweyne Cali Guudlaawe oo Magaalada Muqdisho kulan kula qaatay...
Jubbaland oo mowqifkiisa ku aadan doorashooyinka muranku ka taaganyahay soo bandhigay..
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo guriga uu ka deggen yahay...
Dagaalkii u dhaxeeyay booliska Israa’iil iyo shacabka Falastiin...
Mohamed Abdullahi Mohamed - May 10, 2021 0